သင်ဒါတွေသိပြီးပြီလား ? - JAPO Japanese News
ကြာ 22 Aug 2019, 16:34 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေက ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာနဲ့ တော်တော်လေးကို ကျယ်ပြန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံက ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေလို့ပါ။ အမျိုးမျိုးသော ကောလာဟလတွေနဲ့ပဲ ရှေ့ရောက်နေတာရယ် မမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေ ပြန်နှံ့နေတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စီကြည့်မယ်နော်။ စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လောက်လောက်သိနိုင်မလဲ ?
တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ငလျင်အကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ လောက်ဖြစ်ပွားခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ မီးတောင်တွေများပါတယ်။ ရေပူစမ်းတွေရှိတာကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပေမယ့်လည်း ငလျင်ကတော့ မလှုပ်စေချင်ဘူးလေနော် … ဒီလိုဂျပန်နိုင်ငံဟာ တစ်နှစ်အတွင်း အကြိမ် ၁ သိန်းလောက် ငလျင်လှုပ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေသတိထားနိုင်တဲ့ မြေငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်မှုက အကြိမ်ပေါင်း ၁၅၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်ရက်ကို ၅ ခါ တစ်နေရာမဟုတ် တစ်နေရာရာမှာ ငလျင်တွေလှုပ်နေမှာပေါ့နော်။
အသက် ၁၀၀ ကျော်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက အယောက် ၅၀,၀၀၀ အထက်ရှိခြင်း
အသက်ရှည်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့နာမည်ကြီးပေမယ့် ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကို မသိကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၁၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်လောက်မှာ အသက် ၁၀၀ အရွယ်သက်ကြီးရွယ်အို အရေအတွက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
သေနတ်နဲ့ လူသတ်မှုတစ်နှစ်မှာ ၂ ကြိမ်လောက်သာဖြစ်ပွားခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်အတွင်း အကြိမ် ၁၀,၀၀၀ ကျော် သေနတ်နဲ့လူသတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ပျှမ်းမျှ ၂ ကြိမ်လောက်ပဲ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ 金剛組（こんごうぐみ）ခွန်းဂိုးဂုမိ ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီဟာ ၅၇၈ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်သမိုင်းရှိပြီး ရှေ့အကျဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကျွန်းပေါင်း ၆,၈၅၂ ကျွန်းကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပေမယ့် လူနေတဲ့ကျွန်းကပေါင်း ၂၆၁ ကျွန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။ ကျန်တာက လူမနေတဲ့ကျွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ် ကျွန်းအများဆုံးနိုင်ငံက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကျွန်းပေါင်း ၁၇,၅၀၈ ကျွန်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ လူနေတဲ့ကျွန်းက ၃,၀၀၀ လောက်ရှိတာကြောင့် လူမနေတဲ့ကျွန်းဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံကပိုပြီးတော့များပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ၁၀ မိနစ်လောက်နောက်ကျတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပျှမ်းမျှ ၁၈ စက္ကန့်လောက်ပဲ နောက်ကျပါတယ်။ ၅ မိနစ်လောက်နောက်ကျတယ်ဆိုရင် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီး နောက်ကျတာတွေ ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအရေအတွက်ထက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အရေအတွက်က ပိုမိုများပြားခြင်း
မွေးဖွားနှုန်းတွေကျဆင်းလျက်ရှိပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ရုတ်တရက်ကလေးအရေအတွက်နဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အရေအတွက်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ တိရိစ္ဆာန်အရေအတွက် ၂၃,၃၀၀,၀၀၀ ကောင်ရှိပြီး ၁၅ နှစ်အရွယ်အထိကလေးအရေအတွက် ၁၇,၀၀၀,၀၀၀ ယောက်ပဲရှိပါတယ်။
ကလေးသုံးထက် လူကြီးသုံး Diaper တွေက ပိုရောင်းရခြင်း
ကလေးဦးရေကျဆင်းပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတွေတိုးပွားနေတာကြောင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
မွေးစားခံရတဲ့ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အရွယ်ရောက်တဲ့ယောကျ်ားလေးများဖြစ်နေခြင်း
ကလေးမရှိတဲ့အိမ်တွေက မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးမွေးစားကြပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းက အရွယ်ရောက်ပြီးသား ယောကျ်ားလေးတွေက မွေးစားခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အိမ်ရဲ့အမွေတွေကို ဆက်ခံနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တိုက်တန်းနစ်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့တောင် ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီမှာစီးနင်းလိုက်ပါခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော ဂျပန်လူမျိုး Hosono ဟာ အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေကိုထားခဲ့ပြီး တစ်ယောက်တည်းအသက်ကယ်လှေကိုစီးလာခဲ့တာကြောင့် သူရဲဘောကြောင်တဲ့သူအနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အပြစ်တင်ခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာ အလုပ်အကိုင်လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
လူဦးရေ ၃ ဆနီးနီးကွာခြားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံထက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပိုပြီးတော့များပါတယ်။ အဲ့ဒီအရေအတွက်ကတော့ စက်ပေါင်း ၅,၅၂၀,၀၀၀ လုံးတောင်မှရှိပါတယ်။
နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်လည်းရှိပြီး ကိုယ့်အခန်းနဲ့ အိမ်သာတွေကို ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြရပါတယ်။
Tatoo ထိုးထားရင် ရေပူစမ်းထဲနဲ့ ရေကူးကန်ထဲဝင်လို့မရခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Tatoo ထိုးထားတယ်ဆိုတာနဲ့ ယာခူဇာ ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်လန့်နေတာကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အများသုံးရေပူစမ်းတွေ ရေကူးကန်တွေထဲ ဝင်ရောက်လို့မရပါဘူး။
ဂျပန်နိုင်ငံက ဂျူးလူမျိုးဒုက္ခသည်များကို လက်ခံထားခြင်း
ဂျာမဏီနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားခဲ့ပေမယ့် လူ့အသက်တွေကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်လို့ ဂျူးလူမျိုးတွေကို ဂျာမဏီနိုင်ငံကနေ လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ လက်ခံဝင်ရောက်ဖို့ကို ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဂျုးလူမျိုး အယောက် ၆,၀၀၀ ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နာရီကို ၅၀၀ ကီလိုမီတာကျော်နဲ့ အလျင်မြန်ဆုံးရထားရှိခြင်း
လက်ရှိမှာဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ Linear motor car က တစ်နာရီကို ၅၀၀ ကီလိုမီတာကျော်ပါတယ်။ သင်လည်းအစမ်းလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပါတယ်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ အယောက် 1,600,000ကျော် နိုင်ငံသားအနေနဲ့ခံယူထားခြင်း
အစိုးရရဲ့လူဝင်မှုကြည့်ကျပ်ရေးမူဝါဒအရ ဂျပန်လူမျိုးတွေတော်တော်များများက ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုရောက်သွားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံး ပြောင်းရွေ့နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပေးနေတဲ့ JAPON အယောက် ၇၀၀ ရှိခြင်း
စပိန်ဘာသာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို JAPON လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Family Name အနေနဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေက အယောက် ၇၀၀ လောက်ရှိနေတာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံကနေ ရောက်လာခဲ့တဲ့မစ်ရှင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကိုမပြန်ဘဲ စပိန်နိုင်ငံမှာ ကျန်ရှိနေပြီး အဲ့ဒီသားစဥ်မြေးဆက်တွေက JAPON ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါးတွေက နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခြင်း
ဆော်လမွန်ငါးတွေက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘဲ နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အားလုံးစားနေကြတဲ့ဆော်လမွန်ငါးတွေက နော်ဝေးဖွားတွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်းသီးသန့်နေသူ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိနေခြင်း
ကိုယ့်အိမ်မှာနေတဲ့လူဦးရေက ၁ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ရင် တော်တော်လေးကို များပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပိုင်းငလျင်ကြောင့် ကမ္ဘာမြေဝင်ရိုးဟာ ၁၇ စင်တီမီတာလှုပ်ရှားခဲ့ပြီး တစ်ရက်ကို ၁.၈ Microsecond တိုလာပါတယ်။ လေ့လာရေးသမိုင်းအရ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဝင်ရိုးကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း Anime တွေက ဂျပန်နိုင်ငံက ဖန်တီးခြင်း
Anime တွေအများကြီးရှိလို့ Anime တွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက် ကျောင်းတွေလည်း ဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီး အသံသရုပ်ဆောင်တွေကိုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ကျောင်းတွေချည်းပဲ ၁၃၀ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။
မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ထင်ပေမယ့် နောက်ထက်အကြောင်းအရာတွေကို နောက်မှထပ်ပြောပြမယ်နော်…. စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်နှစ်ခုလောက်သိထားပြီးသားလဲ ?
မြေငလျင်ကြီးမှာ အတူတူရှိခဲ့တဲ့ ကြောင်လေးနှစ်ကောင်
ဆွဲထိုးတာခံပြီး ငွေပြန်ညစ်တာက ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်ဆူပူခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်း